FEATURED Archives - ZAY MEL GYI
Air Jordan 1 Zoom CMFT “Chicago/Blacktoe”
A new Yeezy logo?
SNEAKERS January 10, 2022
Unboxing and Dismantling Nike Air Jordan 1 Bloodline ASMR! (Unboxing gone wrong)
Vans ရဲ့ နောက်ထပ် collab CDG X VANS
SNEAKERS January 3, 2022
ဒေါ်လာ ၁သိန်းတန် Hublot နဲ့ Murakami ပေါင်းစပ်မှု
HYPEWEAR December 9, 2021
Intermilan နဲ့ ကမ္ဘာကျော် fashion house Moncler ရဲ့ collab
MASTERMIND X BAPE FW21
HYPEWEAR December 3, 2021
YouTube ကပိုက်ဆံဘယ်လိုပေးလဲ? | Q&A Section with Banyar
AIR FORCE 1 တစ်ရံရှိရင် ဘာလုပ်လုပ်တင့်တယ်တယ်
Unboxing and Details of Our AIR DIOR
VIDEOS December 24, 2021
2021 အတွက် အကောင်းဆုံး Accessories များ
RTFKT ကိုဝယ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ NIKE
SNEAKERS December 15, 2021
အမြင့်ဆုံး rating တွေနဲ့ Spiderman: No Way Home
TRENDY December 15, 2021
Nike’s Air Max Plus for your winter
FOOTWEAR December 6, 2021
2021 The Shoe Of The Year
FOOTWEAR December 4, 2021
FOOTWEAR December 3, 2021
အသစ်ထွက်လာဦးမယ့် Balmain ရဲ့ futuristic sneakers
FOOTWEAR November 29, 2021
ကမ္ဘာပေါ်မှာ fashion နဲ့ပတ်သက်ရင် ဩဇာအကြီးဆုံး မဂ္ဂဇင်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ HYPEBEAST ရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ 2021 ခုနှစ်တစ်ခုလုံးစာအတွက် အကောင်းဆုံးဆုရ Brands တွေထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးဖိနပ်ဆုကိုတော့… ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Virgil Abloh နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ “The 50” တွေကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ We will always miss...
Virgil Abloh သေဆုံးခြင်းနဲ့အတူ မတရားစျေးတက်လာတဲ့ Resell စျေးကွက်
Sneakers လောကရဲ့ နတ်ဘုရားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ Virgil ရဲ့ ကွယ်လွန်ခြင်းနဲ့အတူ နောက်ဆက်တွဲ ဂယက်ရိုက်မှုအဖြစ်.. Off-White x Jordan collab pairs တွေရဲ့ စျေးက2ဆနီးပါးအထိ ခုန်တက်ကုန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ အရမ်းကြိုက်ရတဲ့ OW Jordan 1 Chi ဆိုရင်...
G-Dragon ရဲ့ Virgil Abloh အတွက်ဖိနပ်
မထင်မှတ်ဘဲ ရုတ်တရက်တက်လာတဲ့ Virgil Abloh သေဆုံးခြင်းရဲ့ ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် G-Dragon က သူရဲ့ customized pair ဖြစ်ဖို့များတဲ့ Off-White Jordan 1 ကိုမှ Peaceminusone logo တွေထည့်ထားတဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံကို Instagram မှာတင်လာခဲ့ပါတယ်။
ယစ်ပူဇော်ပွဲလို့ စွပ်စွဲခံနေရတဲ့.. ASTROWORLD! (EXPLAINED)
© Copyright 2021 ZAYMELGYI